हेर्नुस कस्तो छ ? यस वर्षको आफ्नो रासिफल - Everest Dainik - News from Nepal
हेर्नुस कस्तो छ ? यस वर्षको आफ्नो रासिफल
काठमाडौं, बैशाख ०१ । ज्योतिष ओजराज लोहनी ‘उपाध्याय’को विश्लेषण– यस वर्षमा कुन राशीको भाग्य कस्तो ?
राजनीतिमा एक पछि अर्को समस्याले पदप्रतिष्ठामा समेत आँच आउनेछ । आषाढ ९ देखि कार्तिक १२ गते सम्म गुरुको अनुकूल प्रभावले बोल्न विचार पुर्‍याउँदा वैदेशिक कार्यमा सुधार आउनुको साथै व्यापारमा प्रगति हुने, पति(पत्नी बीच सम्बन्ध राम्रो बन्ने, परिवारिक सहयोग मिल्ने तथा शैक्षिक यात्राको अवसर मिल्ने, सन्तानबाट लाभ हुने, प्रेममा सफल हुने र वैवाहिक कार्यमा सकारात्मक कुरा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
अरुको काम धेरै गर्नु परे तापनि जश पाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहनेछ । गलत विचार प्रशस्त मात्रामा बढ्नेछ । समयमा निर्णय नहुँदा आफ्नो काममा अरुले अधिकार जमाउनेछन् । नोकरीमा एकपछि अर्को समस्याले ग्रसित हुनुपर्नेछ । विनाकारण दोषी भई स्थानान्तरण हुनेछ ।